Wodii Arad hene so nkonim (1-3)
Ɔwɔ a wɔde kɔbere ayɛ (4-9)
Israelfo nantew twaa Moab ho hyiae (10-20)
Wodii Amorifo hene Sihon so nkonim (21-30)
Wodii Amorifo hene Og so nkonim (31-35)
21 Bere a Arad hene+ a ɔyɛ Kaananni a na ɔte Negeb no tee sɛ Israelfo nam Atarim kwan so reba no, ɔkɔtow hyɛɛ wɔn so, na ɔkyeree wɔn mu bi kɔe. 2 Enti Israel hyɛɛ Yehowa bɔ sɛ: “Sɛ wode saa nkurɔfo yi hyɛ me nsa a, sɛnea ɛte biara mɛsɛe wɔn nkurow pasaa.” 3 Enti Yehowa tiee Israelfo nne, na ɔde Kaananfo no hyɛɛ wɔn nsa, na wɔsɛee wɔne wɔn nkurow pasaa. Enti wɔtoo hɔ din Horma.*+ 4 Bere a wɔtoaa wɔn akwantu no so fii Hor Bepɔw+ ho no, wɔfaa Ɛpo Kɔkɔɔ kwan no so sɛnea ɛbɛyɛ a wobetwa afa Edom asaase no ho.+ Akwantu no nti, na nkurɔfo no* abrɛ. 5 Na nkurɔfo no kasa tiaa Onyankopɔn ne Mose+ mpɛn pii sɛ: “Adɛn nti na mode yɛn afi Egypt aba sare yi so sɛ yemmewuwu? Aduan biara nni ha, nsu biara nni ha,+ na aduanfõ yi afono yɛn.”*+ 6 Enti Yehowa maa awɔ a wɔn ano wɔ bɔre* baa nkurɔfo no mu bɛkekaa wɔn, na Israelfo pii wuwui.+ 7 Enti nkurɔfo no baa Mose nkyɛn, na wɔkae sɛ: “Yɛayɛ bɔne efisɛ yɛakasa atia Yehowa ne wo.+ Pa Yehowa kyɛw ma yɛn, na ɔmma awɔ no nkɔ.” Na Mose paa kyɛw maa nkurɔfo no.+ 8 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Hwɛ ɔwɔ a n’ano wɔ bɔre,* na yɛ bi sɛn dua so. Na sɛ ɔwɔ ka obi a, ɔmma n’ani so nhwɛ nea ɛsɛn hɔ no na onnya nkwa.” 9 Ɛhɔ ara na Mose de kɔbere yɛɛ ɔwɔ+ de sɛn dua so.+ Na bere biara a ɔwɔ bɛka obi no, na wahwɛ ɔwɔ a wɔde kɔbere ayɛ no, na wanya nkwa.+ 10 Ɛno akyi no, Israelfo tui, na wɔkɔkyekyee asoɛe wɔ Obot.+ 11 Afei wotu fii Obot kɔkyekyee asoɛe wɔ Ye-Abarim,+ sare a ɛne Moab di nhwɛanim a ɛwɔ apuei fam no so. 12 Wotu fii hɔ nso, na wɔkɔsoɛɛ Sered Bon* ho.+ 13 Wɔsan tu fii hɔ, na wɔkɔsoɛɛ Arnon mpɔtam.+ Sare a efi ase fi Amorifo hye so no, ɛso na Arnon wɔ, efisɛ Arnon na ɛyɛ Moab hye, na ɛda Moab ne Amorifo ntam. 14 Ɛno nti na wɔakyerɛw wɔ Yehowa Akodi nhoma no mu sɛ: “Waheb a ɛwɔ Sufa, ne Arnon abon,* 15 ne baabi a abon* no sian* a ɛtrɛw kɔ Ar kurow no ho na ɛkɔfa Moab hye so no.” 16 Afei wofii hɔ kɔɔ Beer. Eyi ne abura a Yehowa kaa ho asɛm kyerɛɛ Mose sɛ: “Boaboa nkurɔfo no ano na memma wɔn nsu” no. 17 Saa bere no, Israelfo no too dwom sɛ: “O asubura, tue! Munnye so* ɛ! 18 Abura yi na abirɛmpɔn tui. Ɔman no mu adehye na wotui.Wɔde ahempoma ne wɔn ankasa mpoma na etui.” Afei wofii sare so hɔ kɔɔ Matana. 19 Na wofii Matana kɔɔ Nahaliel, na wofii Nahaliel kɔɔ Bamot.+ 20 Wofii Bamot kɔɔ obon a ɛwɔ Moab asaase so+ wɔ Pisga atifi+ a ɛkyerɛ Yesimon* no ho.+ 21 Na Israel somaa nkurɔfo kɔɔ Amorifo hene Sihon hɔ kɔka kyerɛɛ no sɛ:+ 22 “Ma yentwam mfa w’asaase so. Yɛremman mfa afuw anaa bobefuw* biara mu. Yɛrennom abura biara mu nsu. Yɛbɛfa Ɔhene Kwan no so kosi sɛ yebetwam w’asaase so.”+ 23 Nanso Sihon amma Israelfo no amfa n’asaase so. Mmom Sihon boaboaa ne nkurɔfo nyinaa ano, na wopue kohyiaa Israelfo wɔ sare no so, na ɔbaa Yahas, na ofii ase ne Israel koe.+ 24 Na Israelfo de sekan kum no,+ na wɔfaa n’asaase,+ efi Arnon+ kosi Yabok.+ Ná ɛhɔ bɛn Ammonfo, efisɛ Yaser+ wɔ Ammonfo hye so.+ 25 Enti Israelfo faa nkurow yi nyinaa, na wofii ase tenatenaa Amorifo nkurow nyinaa mu,+ Hesbon ne ɛho nkurow nyinaa mu. 26 Ná Hesbon yɛ Amorifo hene Sihon kurow. Ɔne Moab hene koe, na ogyee ne nsaase nyinaa kosii Arnon tɔnn. 27 Eyi na ɛkɔfaa akasabebu a wɔde di fɛw yi bae sɛ: “Bra Hesbon. Ma wɔnkyekye Sihon kurow no mma ne fapem nyɛ den. 28 Efisɛ ogya bi fii Hesbon bae, ogyaframa bi fii Sihon kurow mu. Ahyew Ar a ɛwɔ Moab, Arnon sorɔnsorɔmmea* wuranom no. 29 Moab, asɛm ato wo! Mo, Kemos+ nkurɔfo, wɔbɛsɛe mo! Ɔma ne mma mmarima dan akobɔfo, na ɔma Amorifo hene Sihon kyere ne mma mmea de wɔn kɔ. 30 Momma yɛntow nhyɛ wɔn so;Hesbon ase bɛhyew akosi Dibon+ tɔnn;Momma yɛnsɛe no nkodu Nofa tɔnn;Ogya bɛhyew akodu Medeba+ tɔnn.” 31 Enti Israelfo fii ase tenatenaa Amorifo asaase so. 32 Afei Mose somaa mmarima bi ma wowiaa wɔn ho kɔhwɛɛ sɛnea Yaser+ te. Na wɔfaa ɛho nkurow, na wotuu Amorifo a wɔtete hɔ no. 33 Ɛno akyi no, wɔdan wɔn ho, na wɔfaa Basan Kwan so foro kɔe. Na Basan hene Og+ de ne nkurɔfo nyinaa kohyiaa Israelfo no sɛ wɔne wɔn rekɔko wɔ Edrei.+ 34 Na Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Nsuro no,+ efisɛ mede ɔne ne nkurɔfo nyinaa ne n’asaase bɛhyɛ wo nsa,+ na sɛnea woyɛɛ Amorifo hene Sihon a na ɔte Hesbon no, saa ara na wobɛyɛ no.”+ 35 Enti wokunkum ɔne ne mma ne ne nkurɔfo nyinaa, na anka ne nkurɔfo no baako mpo;+ na wɔfaa n’asaase no.+
^ Anaa “nkurɔfo no kra.”
^ Anaa “bɔn yɛn kra.”
^ Anaa “awɔ a wɔka a, ɛhyehye sɛ ogya.”
^ Anaa “ɔwɔ a ɔka a, ɛhyehye sɛ ogya.”
^ Anaa “nsubon.”
^ Nt., “abon no ano.”
^ Anaa “Monto dwom mma no.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “anwea pradadaa; sare so.”